Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 14
Misy mahalala ve hoe aiza ny afovoan-tany izay toa ny masoandro sy ny planeta toa mihodinkodina? Namaky aho fa mety i Alcyone na Sirius ihany.
Ny astronomo dia tsy mbola namaritra hoe iza ilay kintana no ivon'izao rehetra izao ao toto. Ny kintana tsirairay dia nieritreritra ho ivon-toerana afovoany farany no hita fa nihetsika izy ireo. Raha mbola mihazona fotsiny amin'ny lafiny ara-batana ny astronomia, dia tsy hahita ny afovoan-toerana izy ireo. Ny tena zava-misy dia tsy misy na iray amin'ireo kintana hita ireo fa ny afovoan'izao rehetra izao. Ny afovoan'izao rehetra izao dia tsy hita maso ary tsy ho hitan'ny teleskaopy. Ilay hita maso izao rehetra izao dia ampahany kely amin'ny tena rehetra, amin'ny lafiny iray ihany fa ny hita amin'ny olona, ​​ny vatany, dia ampahany kely amin'ny tena lehilahy. Ny vatana ara-batana, na olona na izao rehetra izao, dia misy fitsipika miforona izay mitazona ireo singa roa hita maso. Amin'ny alàlan'ny fotokevitra miforona no misy fitsipika iray hafa, ny fitsipiky ny fiainana. Ny fitsipiky ny fiainana dia miitatra mihoatra ny fitsipiky ny vatana sy ny endrika mifototra ary mihazona ny singa rehetra amin'ny vatana vatana sy ny vatana rehetra ao anaty habaka mihetsika. Ny fitsipiky ny fiainana dia tafiditra ao anaty fitsipika lehibe kokoa, izay tsy takatry ny sain'olombelona, ​​tsy misy fetra toy ny habaka. Ity fitsipika ity dia voasambotr'ireo mpanoratra ny fivavahana sy ny soratra masina ho Andriamanitra. Izy io no Universal Universal, izay ahitana ny zavatra rehetra amin'ny fisehoana, hita na tsy hita. Hendry sy manan-kery rehetra izy, nefa tsy manana anjara amin'ilay dikany izay tsy misy faritra ny habaka. Ao anatin'izany rehetra izao dia izao tontolo izao manontolo amin'ny ankapobeny ary miaina ny zava-drehetra ary mihetsika ary manana ny maha izy azy. Io no ivon'ny tontolo rehetra. "Ny foibe dia na aiza na aiza sy ny tsy fahita."
Inona no mahatonga ny fo amam-batana; Moa ve ny fifindran'ny onja avy amin'ny masoandro, ary koa ny momba ny fofona?
Ny fihenan'ny masoandro dia tsy mahatonga ny fo hikapoka, na dia ny fifandraisan'ny masoandro amin'ny fijanonan'ny ra sy ny fiainana rehetra eto ambonin'ny tany. Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny fitepon'ny fo dia ny asan'ny fofonaina amin'ny ra satria mifandray amin'ny alàlan'ny pulmonary, ny efitrano fivoaran'ny rivotra. Ity no hetsika fofonaina ara-batana amin'ny ra ara-batana, ilay foibe ivony izay ny fo. Saingy ny hetsika fofon'aina ara-batana dia tsy ny tena antony mahavoa ny fitempon'ny fo. Ny antony voalohany dia ny fisian'ny fikambanam-panahy izay miditra amin'ny vatana rehefa teraka izy ary mijanona mandritra ny androm-piainan'ny vatana. Ity sampana ara-tsaina ity dia mifandraika amin'ny iray hafa izay tsy ao amin'ny vatana, fa miaina amin'ny atin'ny vatana, manodidina ary miasa amin'ny vatana. Amin'ny alàlan'ny hetsika sy ny fifandraisan'ireto fikambanana roa ireto dia mitohy hatrany ny fofonaina ao anatiny sy ao anatiny. Miaina ao anaty rà ny hery ara-tsaina ao amin'ny vatana ary io dia mivantana amin'ny alàlan'ity sampana ara-tsaina ity izay miaina ao anaty ra izay voadona ny fo.
Ny “fo iray” dia lohahevitra lehibe; Resaka "fofonaina" dia lohahevitra lehibe; betsaka no azo soratana momba azy ireo. Mba hahafahantsika mamaly ny ampahany farany amin'ny fanontaniana: "koa ny momba ny fofonaina" dia tsy maintsy ampahafantarina isika ny momba izany.
Inona no ifandraisan'ny fo sy ny firaisana ara-nofo-ary koa ny fofona?
Ny fon'ny olona dia azo lazaina hoe manitatra amin'ny vatana manontolo. Na aiza na aiza misy ireo arterina, vena na capillary, dia misy ny ramication ny fo. Ny rafi-pitondrana ihany no sehatra mihetsika amin'ny rà. Ny ra kosa dia fitaovan'ny fofon'aina hifandraisana eo amin'ireo taova sy ny vatana. Ny ra àry, dia mpitondra hafatra eo anelanelan’ny fofonaina sy ireo taovam-pananahana. Misitraka ny havokavony izahay, ny rivotra no mamindra ny rivotra mankany amin'ny ra, ny hetsika ny ra dia manaitra ny taovam-pananahana. Ao amin'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny The Zodiac, V., izay niseho tao amin'ny "The Word," Vol. 3, p. 264-265, ny mpanoratra dia miresaka ny gland an'ny Luschka, ny taova manokana faniriana, amin'ny faniriana firaisana ara-nofo. Ao dia voalaza fa amin'ny fampidirany tsirairay ny ra dia mandrisika ary mihetsika eo amin'ny lalànan'ny Luschka ary ity taova ity dia mamela ny hery misintona ao anatiny na ho ambony. Raha midina izy dia midina, mihetsika miaraka amin'ny taova mifanohitra, izay virgo, fa raha miakatra kosa izy dia vita noho ny sitrapo ary ny làlany dia amin'ny alalàn'ny hazondamosina. Ny fo no foibe ivon'ny ra, ary efitrano fandraisana ihany koa izay mihaino ny saina rehetra ao an-tsaina. Ny eritreritra momba ny natiora dia miditra amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny taova lahy; mifoha izy ireo ary mangataka fidirana ao am-po. Raha manome saina azy ireo ao am-po ny saina ary manome azy ireo ny fihenan'ny ra ary mitombo ny ra mankany amin'ny faritra mifanaraka amin'ilay hevitra. Ny fitomboan'ny fitomboana dia mila fofonaina haingana kokoa, mba hodiovina amin'ny alàlan'ny havokavoka ny ra. Mitaky telopolo segondra eo ho eo ilay fo mandalo ao am-po mankany amin'ny fihenan-doha ka miverina amin'ny fo amin'ny fihetsehana ao anaty lalan-drà, manao tsingerina iray feno. Tsy maintsy mihetsika haingana ny fo ary ho fohy kokoa ny fofonaina rehefa miala voly ny eritreritra firaisana ary manainga ny ra avy ao am-po ny taovam-pananahana.
Aretina biolojika maro sy fitarainana mitebiteby no ateraky ny fandaniana tsy misy ilana ny hery velona amin'ny alàlan'ny eritreritra momba ny firaisana; na, raha tsy misy fandaniana, amin'ny alàlan'ny fiverenan'ny taovam-pananahana manontolo amin'ny hery velona miverina avy amin'ireo faritra resahina ary amin'ny fiverenan'ny rà avy amin'ny taovam-pananahana. Ny hery miteraka dia mivaingana ary novonoin'ny rebound. Ny sela maty dia miditra ao amin'ny ra izay mizara azy ireo amin'ny vatana. Mandoto ny ra sy mankarary ny taova ao amin'ny vatana izy ireo. Ny fihetsiky ny fofonaina dia famantarana ny fanjakan'ny saina sy ny fisoratana anarana ny fihetsem-po.
Ohatrinona ny volana amin'ny olombelona sy ny fiainana hafa eto an-tany?
Ny volana dia manana endrika manintona ny tany sy ny tsiranoka rehetra amin'ny tany. Ny hamafin'ny zavatra manintona dia miankina amin'ny faran'ny volana, ny toerany mankany amin'ny tany, ary ny vanin-taona. Ny fisintony dia matanjaka amin'ny ekoatera ary malemy amin'ny tsato-drivotra. Ny fitarihan'ny volana dia mifehy ny fiakaran'ny valan'aretina amin'ny zava-maniry rehetra ary mamaritra ny tanjaka sy ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina amin'ny ankamaroan'ny zavamaniry.
Ny volana dia misy fiatraikany amin'ny vatana astral, ny filan'ny biby sy ny olona ary ny saina amin'ny lehilahy. Ny volana dia manana lafiny tsara sy ratsy eo amin'ny lehilahy. Amin'ny ankapobeny, ny lafiny ratsy dia aseho amin'ny fizotry ny volana amin'ny vanim-potoana mihamihena; ny lafiny tsara dia mifandray amin'ny volana manomboka amin'ny vanim-potoana vaovao ka hatramin'ny volana feno. Ity fampiharana ankapobeny ity dia novaina isaky ny tranga; satria miankina amin'ny fifandraisan'ny olona manokana amin'ny fanaingoana azy ara-tsaina sy ara-batana amin'ny ambaratonga mety hisy fiantraikany eo aminy ny volana. Ny fitaomana rehetra anefa dia mety ho toherina amin’ny alalan’ny sitrapo sy ny saina ary ny eritreritra.
Ny masoandro na ny volana ve no mifehy na mitantana ny vanim-potoana? Raha tsy izany, inona no atao?
Tsy mifehy ny fotoana ny masoandro; ny fahalalana mahazatra fa ny vanim-potoana fadimbolana dia mifanandrify amin'ny dingana sasany amin'ny volana. Ny vehivavy tsirairay dia samy hafa mifandraika amin'ny volana ao anatin'ny fombafomba ara-batana sy ara-tsaina; satria ny fitaoman-jaza dia miteraka fihenan-kevitra fa ny dingana mitovy amin'ny volana dia tsy mitondra ny fotoana eo amin'ny vehivavy rehetra.
Ny volana no mahatonga ny mikraoba mpamokatra ho tonga matotra ary miala amin'ny fihary. Ny volana kosa dia misy fiantraikany mitovy amin'ny lahy. Ny volana dia misy fiantraikany amin'ny fahatafintohinana ary mahatonga izany tsy ho vita mandritra ny fotoana sasany, ary mamaritra ny vanim-potoana sy ny fotoana fiterahana. Ny volana no tena antony hitondrana ireo vanim-potoana ireo, ary ny volana koa dia antony iray manan-danja indrindra amin'ny fivoaran'ny foetus, satria ny vatana astralin'ny reny sy ny foetus dia mifandraika mivantana amin'ny volana. Ny masoandro koa dia misy fiantraikany amin'ny asan'ny taranaka; ny fiantraikany dia hafa noho ny an'ny volana, fa ny volana dia manome kalitao sy hery mitaona ny vatan'ny astral ary ny tsiranoka, ny masoandro dia mifandray amin'ny toetran'ny herinaratra na aina amin'ny vatana, ary ny toetrany, ny natiora sy ny toetra. toetran'ny vatana. Ny masoandro sy ny volana dia mitaona ny lehilahy sy ny vehivavy. Mahery vaika ny fiantraikan'ny masoandro amin'ny lehilahy, ny lunar amin'ny vehivavy.